के मलाई झुक्याएर लेवरमा पठाउन लागिएको हो ?
Wed, Feb 21, 2018 | 11:11:55 NST
16:31 PM (5 months ago)
प्रश्नः रोजगारीका लागि साउदी जान भनेर प्रक्रिया अघि बढाएँ। मलाई म्यानपावर कम्पनीले अफर लेटर पनि देखायो। त्यसमा अफिस सेक्रेटरी लेखेको छ। तर मेडिकल गर्न जाँदा मलाई दिइएको काजगमा लेवरको भिसा भनेर लेखेको थियो। के मलाई झुक्याएर लेवरमा पठाउन लागिएको हो ? साउदी अरबको भिसा चेक गर्ने कुनै माध्यम छैन्?
उत्तरः राजिव जी, साउदीबाट आउने ५० प्रतिशत कामदारको मागमा काम एउटा भनिएपनि अर्कै काम लेखिएको हुन्छ। किनभने साउदीमा अफिस सेक्रेटरी जस्ता काममा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले तपाईंको भिसामा लेवर लेखिएको हुनसक्छ। तर यो नै अन्तिम सत्य हो भनेर आँखा चिम्लेर पत्याइहाल्नु चाहिँ हुँदैन। म्यानपावरले तपाईंलाई ठगी गर्न लागेको पनि हुन सक्छ। त्यसैले म्यानपावरसँग राम्ररी बुझेर मात्रै जानुहोला। तपाईंले म्यानपावरलाई कति विश्वास गर्नुहुन्छ, अनि म्यानपावरले तपाईंलाई कति विश्वास गर्छ त्यसका आधारमा तपाईंले साउदी जाने कि नजाने भन्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले नेपाल प्रहरीले जारी गर्ने चारीत्रिक प्रमाणपत्र कसरी बनाउन सक्छन् ?
म्यानपावरलाई बुझाएको पैसा र पासपोर्ट फिर्ता कसरी पाउछु ?
आजाद भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जानु गैर कानूनी काम हो ?
दुबईमा विदेशी कामदारका लागि हाते पुस्तक : कामदारले गर्न हुने र नहुने काम यी हुन् ‘दुबईमा रहेका १० लाख विदेशी कामदारलाई निःशुल्क बाँडिने यो पुस्तिकाले कामदारलाई दुबईको कानुनसँग जानकार र उनीहरु यहाँ बस्दा दैनिकी सरल र सहज बनाउन सहयोग मिल्छ,’ पुस्तकको विमोचन गर्दै सुरोरले भन्नुभयो ।
विदेशबाट फर्किंदा छोराले चिनेन दिल्लीबाटै गीतालाई दलालले कुवेतका कुनै साहुले किनिसकेका रहेछन् । जुन कुरा उहाँले पत्तो पाउनुभएन । नेपालबाट दिल्ली अनि दिल्लीबाट कुवेत । गीता कुवेत पुग्दा दुई ठाउँमा बेचिइ सक्नुभएको थियो ।
विदेशको कमाई : खाइलाइ टुप्पी हल्लाई (भिडियो सहित) तर साउदीको बसाइ उहाँले सोचे जस्तो पटक्कै भएन । खानका लागि ठिक्क पारेको भात कागले खाइदियो । अनि, भात खाएर उड्ने कागसँगै रमेशका सपना पनि उडे ।
आइतबार रियाल, दिनार, दिर्हाम र रिंगिटको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं, फागुन ६ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २७ रुपैयाँ ३२ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ ।